UWinnie Mandela - Ukuqala kwempilo yakhe
Ngomhla ka-26 Septemba 1936, uNomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela wazalwa eBizana Village ebizwa ngokuthi iTranskei (eMpumalanga Kapa). Umama wakhe, uNomathamsanqa Mzaidume (Gertrude), wafundisa isayensi yasekhaya kanye nobaba wakhe, uColumbus Kokani, owayenguNgqongqoshe Wezakhiwo Zamahlathi Nezolimo eTranskei. UWinnie wayengowesine kwezingane eziyisishiyagalombili. Unina kaWinnie washona ngo-1944, lapho uWinnie eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala.
Noma kunjalo, uWinnie wayesakwazi ukuya esikoleni samabanga aphansi eBizana futhi aqhubeke nokuqeda imfundo yakhe yesikole esiphakeme. Ngokungafani nezinye izingane eziningi ezimnyama eNingizimu Afrika ngaleso sikhathi, uWinnie wanikezwa imfundo ehloniphekile.
Umthetho we-Bantu Education Act ophikisiwe kakhulu waqala ukusebenza ngo-1953 lapho esekhulile. Wafunda eShawsbury eQunu lapho afunda khona amakhono obuholi. Wabuyela ekhaya ukuthola uyise ephinde washada no-Hilda Nophikela owabamukela yena nabafowabo.
Umsebenzi Wezenhlalakahle kaWinnie
Ngaphansi kokululekwa uyise, uWinnie wasuka eTranskei walubhekisa eGoli ngo-1953 ukuze aqhubeke nomsebenzi wezenhlalakahle. Lapha waya esikoleni seJan Hofmeyr of Social Work. Ngo-1955 waphothula isiqu esikoleni sakhe esiphakeme futhi wanikezwa ithuba lokufunda e-USA.
Wenqaba, wakhetha ukuba enze umsebenzi womphakathi ezweni lakubo. UWinnie wenza umsebenzi wezokwelapha endaweni yaseBaragwanath yaseGoli, waba umuntu wokuqala omnyama ofanele ukugcwalisa lo msebenzi. Wabe ezenzela igama esibhedlela, evele emaphephandabeni ekhuluma indaba yokuqala kwakhe okuthobekile kanye nomsebenzi wakhe ophumelelayo.
UWinnie waba nesithakazelo sezombusazwe kanye nokuvuselela ngesikhathi esebenza eBraagwanath Hospital, njengoba ebona ukuhlupheka okukhulu kwabantu baselokishini ayehlala kulo. Ucwaningo lwakhe mayelana nokushona kwezingane e-Alexandra Township, lapho kwashona khona abayishumi kubo bonke abayinkulungwane abazelwe, kwenza uWinnie azi kahle ukungabi ukungalingani ngokomthetho eNingizimu Afrika.
UWinnie wazama izindlela zokushintsha lezi zingalungile futhi wayezikhandla kwezombangazwe ngisho nangaphambi kokuhlangana nomyeni wakhe wesikhathi esizayo kanye nomholi wezombusazwe owaziwayo, uNelson Mandela. Ngesikhathi eseBaragwanath Hospital, uWinnie wahlanganyela no-Adelaide Tshukudu kwenye yezindwendwe zabasebenzi esibhedlela. Laba bobabili baba abangani abaqinile.
Njengabangani, bavame ukukhuluma ebusuku, kanti u-Adelaide utshele uWinnie ngommeli (owayengumongameli we-ANC u-Oliver Tambo) owayemthembisile umshado, nomlingani wakhe wezomthetho uNelson Mandela. UWinnie noNelson bazikhipha kusuku lwabo lokuqala, endaweni yokudlela yamaNdiya eduze namahhovisi akhe omthetho. Wayemdala ngeminyaka engu-16 futhi esevele engumuntu ovelele kwezombangazwe kazwelonke kanye nokulwa nobugebengu bobandlululo.
UWinnie akazange esatshiswe noma avimbelwe ngalokhu futhi ngo-1957, lapho emcela ukuba ashade naye, washo ngokushesha, yebo. Bashade ngoJuni -1958.